Maamuladda Puntland & Jubbaland oo gudbiyay Xubnaha ku matalaya Guddiga doorashooyinka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maamuladda Puntland & Jubbaland oo gudbiyay Xubnaha ku matalaya Guddiga doorashooyinka
Madaxweyne deni ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan in uu gudbiyay Afar xubnood, kuwaas oo Magacyadooda lagu kala sheegay, Axmed Cabdi Hurre, Qawdhan Abshir Garaad, Cabdiraxmaan Biixi iyo Sadam Siciid Axmed.
Dhinaca kale Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gudbiyay laba xubnood oo katirsanaa Guddigiisii doorashooyinka ee maareeyey doorashadii muranka sababtay ee dib loogu doortay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in ilaa iyo hadda ay Xubnaha Guddiga doorashooyinka ku matalaya ay gudbiyeen Maamul Goboleedyada kala ah, Koonfur Galbeed, Jubbaland, iyo Puntland, sidoo kalena Maanta la sugayo inay dhankooda soo gudbiyaan Maamulada Galmudug & Hir-Shabeelle.
20-kii Bishaan ayay ku ekeyd mudada ay ku heshiiyeen Madaxda dowladda & Dowlad goboleedyada in lagu soo Magacaabo Guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka, balse dib u dhac uu ku yimid, waxaana dhawaan la filayaa in si rasmi ah Guddiyada loogu dhawaaqo.
Maamuladda Puntland & Jubbaland oo gudbiyay Xubnaha ku matalaya Guddiga doorashooyinka was last modified: October 22nd, 2020 by Admin
Maamulka Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday howlgal waddo furis ah
Mid ka mid ah bukaano ku jiray xarun karantiil oo ku taal Garoowe oo geeriyooday